Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Seychelles si ay ula wadaagaan Aragtida Cimilada ee Kulminta COP
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska
Steen G. Hansen iyo ururinta buugaagta deegaanka ee Cimilada Seychelles
COP waxay isu keeni doontaa shaqsiyaad badan oo saamayn leh si ay uga wada hadlaan waxa loo baahan yahay in lagu sameeyo isbeddelka cimilada, Steen N. Hansen wuxuu leeyahay, ku bilow inaad ogaato waxa jira, ka dibna ilaali wixii la arkay inay jiraan. Mudane Hansen u heellanaanta dabeecadda iyo maareynta dabeecadda waxaa sii huriyay xaqiiqda ah in jawiga adduunka uu ku jiro cadaadis aan hore loo arag.
Deegaanku wuxuu hadda ku jiraa ajandaha qof walba maadaama isbeddelka cimiladu uu naftiisa dareemo afarta gees ee adduunka.
Seychelles waxay isu diyaarinaysaa inay adduunka ku baraarujiso sidii loo ilaalin lahaa waxa ay jasiiraduhu ku barakeeyeen iyagoo rajaynaya in qof walba ku daydo.
Hansen wuxuu qoray dhowr waraaqo dood, aragtiyo, iyo maqaallo ku saabsan dabeecadda, iyo maareynta dabeecadda.
Taxane buuxa oo buugaag ah oo dhammaantood ku salaysan waxa Seychelles waxay leedahay hanti qaas u ah aagga bay'ada waxaa soo saaray Steen N. Hansen, oo u dhashay dalka Holland kuna nool Seychelles. Waxaa gacan ka geysanaya xaaskiisa Seychelles, Marie France, si ay u riixdo in la aqoonsado hawshooda dheer oo adag.
Hansen waa muwaadin Danish ah wuxuu dhashay 1951. Waxay ahayd sanadkii 2015 inuu u soo guuray Seychelles oo uu guursaday sanad kadib Seychelles waxaana loo siiyay deganaansho rasmi ah Jamhuuriyadda Seychelles sanadka 2019.
Hansen wuxuu haystaa shahaadada mastarka ee bayoolaji iyo bachelor -ka juqraafiga iyo geology sidoo kale (dhammaantood waxay ka yimaadeen Jaamacadda Kobanheegan) iyo luqadda Jarmalka iyo dhaqanka (Jaamacadda Odense, Denmark). Kahor imaanshihiisa Seychelles, Mr. Hansen wuxuu ahaa la -taliye cilmiga bayoolajiga iyo macallin sare oo heer kulleej ah. Wuxuu si gaar ah u danaynayey dhawrista bay'ada wuxuuna qoray dhowr waraaqo dood, aragtiyo, iyo maqaallo ku saabsan dabeecadda, maareynta dabeecadda, iyo xitaa walxaha raashinka hiddo loo maareeyay.
Seychelles, wuxuu ku sii waday xiisihiisii ​​dabeecadda iyo maareynta dabeecadda isagoo qorey Flora ee Seychelles ee ugu horreysay oo dhammaystiran laga soo bilaabo 2016 (725 bog) oo lagu daray tiro ka mid ah buugag yar yar oo si sahlan loo akhrin karo oo leh hanti dabiici ah oo ku yaal Seychelles waa la sheegi karaa Geedaha Cajiibka ah ee Jasiiradda Aride (2016); Vallée de Mai - Primeval Palm Forest, Keydka Dabeecadda iyo Goobta Dhaxalka ee UNESCO (2017); Dabeecadda cajiibka ah ee Jasiiradda Curieuse (2017); Beerta Dhirta Qaranka ee Seychelles (2018); Warshadda Shaaha, Raadkeeda Dabeecadda iyo Morne Blanc (2018); Le Jardin du Roi Spice Garden (2018); Xarunta Kala -duwanaanshaha Qaranka ee Seychelles (2019); iyo kii ugu dambeeyay Le Ravin de Fond Ferdinand - Kayd Khaas ah oo ku yaal Praslin (2021) halka uu diiradda saarayo dadaalka maaraynta dabeecadda iyo ilaalinta marka xigta soo bandhigida xulashada dhirta iyo xoolaha.
Si argagax leh, 3 nooc oo dhir ama xayawaan ah ayaa sii baaba'aya saacad kasta saacad kasta, sababtaas awgeed "waxaan qarka u saarannahay inaan noqonno noocii ugu horreeyay ee awood u yeelan kara inaan diiwaangelinno dabar goynteena haddii aan tallaabo hadda la qaadin" (Dr. Christiana Pasca Palmer, Madaxa Qaramada Midoobay ee Kala -duwanaanshaha noolaha). Habka kaliya ee looga bixi karo, raacitaanka Mr. Hansen, waa in la wacyigeliyo dadweynaha iyo sida ugu hooseysa ee suurtogalka ah iyadoo la ogaanayo adduunkeenna qaaliga ah iyo xaaladdiisa halista ah iyadoo la is-baarayo, iyo shaqada Mr. Hansen- ereyadiisii ​​- waa uun tabaruc yar oo is -hoosaysiiya.